Realme C21 bụ usoro ntinye aka nke akụ na ụba yana nnwere onwe maka ụbọchị niile | Gam akporosis
Ihe ntinye Realme na-eme ka ijeozi ya na-adaba Ulo oru ohuru nke ulo oru a, Realme C21. Nkwuputa nke ngwaọrụ ohuru a na-abia mgbe o gosipụtara ya Ezigbo GT, C21 bụ ihe atụ kachasị elu maka ụdị ahụ Gbanwee C20 na a pụtara oké ọnụ price.
A ga-eji ya mee ihe maka ndị chọrọ nnwere onwe maka ụbọchị dum, na nke a, ọ na-agbakwunye atụmatụ yiri nke ọnụ nke etiti etiti yana ịkụ nzọ na nkwụghachi ụgwọ. Realme C21 bụ ekwentị mara mma, wuru ka ogide maka ike ya site n'inwe ihe nkpuchi di egwu.
1 Realme C21, ekwentị na-adọrọ mmasị
2 Nnwere onwe maka ihe karịrị otu ụbọchị ọrụ
Realme C21, ekwentị na-adọrọ mmasị
El Gbanwee C21 na-aga n'ihu ịkụ nzọ na ihuenyo 6,5-inch, mkpebi ahụ na-eguzo na HD +, mana ọ ga-abata na Gorilla Glass 5. Na-echekwa ihu n'ihu nwere 88%, na-enwe naanị obere bezels n'akụkụ, na mgbakwunye na-arịgo n'akụkụ. elu onye notu na center.
Ama a gụnyere Helio G35 si MediaTek, nhazi usoro ntinye nke emere maka ezigbo arụmọrụ ya na egwuregwu vidio, ebe GPU bụ PowerVR GE8320. Ebe nchekwa RAM bụ 3 GB na nchekwa ahụ bụ 32 GB, mana site na iweta oghere MicroSD enwere ike ịgbasa ya ruo 256 GB.
Ugbua n'azụ ya ọ na-agbakwunye igwefoto atọ, nke kachasị bụ ihe mmetụta 13-megapixel, nke abụọ bụ 2-megapixel macro sensor, na nke atọ bụ 2-megapixel omimi. Igwefoto selfie biara na ihe ngosi 5 megapixel, na-edekọ na HD ma na-ese foto ndị nwere uche.
Nnwere onwe maka ihe karịrị otu ụbọchị ọrụ
Na-abịa na nhazi Helio G35 n'onwe ya Realme kwadoro na C21 ga-adịgide karịa ụbọchị nke ndị ọrụ na-eji eme ihe mgbe nile. Batrị etinyere bụ 5.000 mAh, ọ zuru oke maka ngwụcha ọnụ iji rụọ ọbụlagodi egwuregwu gam akporo yana dị ka ngwaọrụ ị nwere ike ịme ihe niile.
Realme C21 hapụrụ ụgwọ 10W, njikọ ya bụ Micro USB ọ bụghị USB-C, yabụ ụgwọ ahụ ga-ewe otu elekere ma ọ bụrụ na ijikọ ya na ike. Ihe na-adọrọ mmasị bụ na ọ na-akụ azụ na ibu ọrụ, na mkpanaka nke ụdị a ọ dị obere ịhụ ya, mana ọ bụ otu n'ime isi okwu ya kachasị mma.
El C21 na-anọ na njikọ 4G mgbe ị na-ekpebi ịrịgo Helio G35Ewezuga nke ahụ, ọ na-abịa Wi-Fi b / g / n, Bluetooth 5.0, minijack maka ekweisi, GPS na micro USB port for caji. Onye na-agụ akara mkpisiaka ga-azụ, aka nri ya na ala ya ebe enwetara ihe mmetụta igwefoto atọ.
Realme UI bụ omenala oyi akwa na ụdị tupu 2.0, ịbụ gam akporo 10 sistemụ arụmọrụ na upgradeable gam akporo 11 na ọnwa na-abịanụ. Ọ na-abịa na ngwa ndị bụ isi iji ya, yana ịnweta Storelọ Ahịa Play na ngwa site ụlọ ọrụ Asia.
IKIRU 6.5-anụ ọhịa IPS LCD na HD + mkpebi / ozodimgba iko 5
Nhazi Helio G35
Kaadị grafik IkeVR GE8320
Nchekwa n'ime 32 GB / O nwere oghere MicroSD ruo 256 GB
Gbanwee CAMERA 13 MP Isi ihe mmetụta / 2 MP Macro Sensor / 2 MP Omimi ihe mmetụta
N'ihu CAMERA 5 ihe mmetụta
OS A gam akporo 10 ya na Realme UI
UMUAKA 5.000 mAh na ibu 10W / Ibu ibu
Njikọ 4G / WiFi / Bluetooth 5.0 / GPS / Micro USB / Dual SIM / Minijack
NDỊ ọzọ Onye na-agụ mkpịsị aka na-abịaghachi
Mbibi na ibu ibu 165.2 x 76.4 x 8.9 mm / 190 gram
El Realme C21 batara na agba abụọ, na-acha anụnụ anụnụ na nwa, ọ bụ ezie na agba nke atọ ga-adị n'ime izu abụọ nke mbata. Ekwenyela ọkwa ya na Malaysia maka ọnụahịa nke ụda 499, ihe dị ka euro 100 iji gbanwee wee rute na nhazi 3/32 GB. Achọpụtaghị ịdị adị ya na mpụga mba a n'oge a, ọ bụ ezie na a na-ekwu na a ga-ewepụta ya na China site na ngwụcha ọnwa Machị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Realme C21 bụ usoro ntinye akụ na ụba yana nnwere onwe ụbọchị niile